दसैंको टिकट असोज ५ गतेदेखि खुल्ने - HimalayaMail.com
कला तथा मनोञ्जन
Advertise your business now!
Home » नेपाल » दसैंको टिकट असोज ५ गतेदेखि खुल्ने
दसैंको टिकट असोज ५ गतेदेखि खुल्ने
In नेपाल, मुख्य समाचार, समाचार
- Updated 13/09/20197:01 am
दसैंका लागि असोज ५ गतेदेखि अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागमा आज बसेको विभागका महानिर्देशक, यातायात व्यवसायी तथा ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त बैठकले असोज ५ देखि अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस पटकको दसैंमा नयाँ यातायात भने थपिएको छैन। दसैं तिहारका लागि हालको प्रचलित भाडाअनुसार नै टिकट बुकिङ हुने विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले दसैँतिहारसम्म पुरानै भाडा रहनेगरी यातायात व्यवसायीसँग सहमति भएको जानकारी दिए। त्यसपछि वैज्ञानिक भाडाादर निर्धारण गरी लागू गरिने हमालले बताए।
‘व्यवसायीहरुले मुख्यतः सडक सुधार र सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभयो, त्यसमा विभागले सहजीकरण गर्नेछ’ हमालले भने ‘३/४ महिनापछि वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरी सोअनुरुप लागू गर्न विभाग प्रतिबद्ध छ।’ वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि बजेट छुट्याइसकिएको उनले जानकारी दिए।
विभिन्न १४ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रिय यातायात व्यवस्थापन अनुगमन समिति गठन हुने भएको छ। सो समितिले टिकटमा हुन सक्ने कालोबजारी अनुगमन गर्नेछ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सडक सुधारका लागि आग्रह गरे। ‘समयमै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो, तर सडकको दूरावस्था सुधार्नुपर्छ, सडकको दूरावस्थाकै कारण यात्रुले सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था नहोस्’ सिटौलाले भने।
Previous Post गण्डकीमा भेटिए सापुका १४ बिरामी
Next Post भारतीय मजदुरको मृत्यु
Love our news? We love to tell you about our new stuff. Subscribe to newsletter!
महिलालाई फोन गरेर जिस्क्याउने दुईजना पक्राउ
25/01/202000 CommentsBy: himalayamail
वीरगञ्ज । फोन गरेर महिलालाई जिस्क्याउने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बाराको देवताल गाउँपालिका– २ बस्ने २० बर्षीय
प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति दिँदै गृहमन्त्री थापाले भनेः एमसीसी अस्वीकार्य
25/01/2020 10CommentsBy: himalayamail
सुर्खेत। गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नेपाल सरकराले एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीमा
राष्ट्रपतिद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना व्यक्त
25/01/202030 CommentsBy: himalayamail
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तामाङ समुदायले मनाउने महान् पर्व सोनाम ल्होसार जस्ता चाडपर्व र संस्कृतिले राष्ट्रिय एकता सुदृढ
© Copyright Himalayamail.com 2017-2019, All Rights Reserved